Breziliàna nidina an-dalambe nanerana ny firenena mba hanohitra ny fampihenan’i Bolsonaro ny tetibola ho an’ny fampianarana ho an’ny daholobe · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraGlobal Voices Brazil
Voadika ny 20 Mey 2019 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, عربي, Swahili, Italiano, English
Mpanao fihetsiketsehana tao Rio de Janeiro: Fitaovampiadianay ny fampianarana! Sary : Marianna Cartaxo / Mídia NINJA/ fampiasàna nahazoana alàlana
Ny 15 May, an'arivony maro ireo Breziliàna nidina an-dalambe tany amin'ireo fanjakana 26 sy ny Distrika Federaly rehetra mba hanohitra ny fampihenan'ny governemantan'i Bolsonaro ny tetibola federaly natao ho an'ny fampianarana izay hiantraika amin'ireo oniversite sy sekoly ampolony mahery.
Tamin'ny faran'ny Aprily, nambaran'ny governemanta ao Brezila ny fampihenana 30 isanjato an'ilay lazaina fa tetibola miovaova natao ho an'ireo fandaniana toy ny herinaratra, ny rano, ny fikarakarana ankapobeny, ary ny fikarohana. Rehefa mijery ny fitambaran'ny tetibola federaly natao ho an'ny fampianarana ambony, tafakatra manodidina ny 3,5 isanjato ny fampihenana. Etsy ankilany, naaton'ny governemanta ny fanampiana ara-bola ho an'ireo 3.500 eny amin'ny ambaratonga ambony nahazo vatsimpianarana avy tamin'ny fanjakàna.
Avy eny amin'ny Paulista Avenue ao São Paulo, toerana mahazatra fanaovana hetsipanoherana, ka hatrany amin'ireo tanin'ny indizeny lavitra be any Alto Rio Negro, akaikin'ny sisintany iraisany amin'i Kolombia, nivoaka niaro ny fampianarana ho an'ny daholobe ny vahoaka. Tao Viçosa, Minas Gerais, olona marobe manodidina ny 5.000 no nanao diabe nitondra elo tanaty orana mikija.
OAYYY. Sary nalaina tamin'ny ‘drone’, ahitàna olona marobe mpanao hetsipanoherana teo amin'ny Av Paulista ao São Paulo mba hanohitra ny fampihenana ny tetibola ho an'ny fampianarana sy siansa. #15M #TodosPelaEducação #TsunamidaEducação #NaRuaPelaEducação #MarchaPelaCiência pic.twitter.com/BmHEYBuF9F
Oniversite federaly miisa 69 sy oniversitem-panjakana marobe no misy ao Brezila, samy manome maimaimpoana fampianarana ambaratonga voalohany sy hatramin'ny dingana fahatelo avokoa, ary tolotra marobe natao ho an'ireo vondrompiarahamonina, toy ny fampianarana tohana, birao torohevitra momba ny lalàna, sy hopitaly.
Tany amboalohany, noheverina ho anà oniversite federaly telo ihany ilay fampihenana, saingy taty aoriana dia nitarina ho amin'ireo tambajotra federaly manontolo. Ambaran'i Abraham Weintraub, minisitry ny fampianarana ao anaty fitondran'i Bolsonaro, hoe “tsy fampihenana” izy ireny fa “fiomanana aminà fandaniana tsy ampoizina”.
Nanamarina ireny fampihenana ireny i Weintraub satria “toeran'ny safotofoto” ireo oniversitem-panjakana. Rehefa nangatahan'ireo mpanangona vaovao izy mba hanondro ohatra iray tamin'ireny “safotofoto” ireny, nomarihany ny fisian'ireo hetsika sosialy sy fanaovana “fety ahitàna olona miboridana” any anaty toeram-ponenan'ny mpianatra
Tany ampiandohan'ny Aprily i Weintraub no notendrena, taorian'ny naha-tafiditra tanaty andiana resabe ilay fitantanana teo alohany, tsy naharitra afa-tsy fotoana fohy. Matetika ilay minisitra vaovao no miteny ny fisianà tsikombakomba ataon'ny elatra havanana, toy ny cocaine ‘crack’ naiditra tao Brezila ho ampahany amin'ny tsikombakomban'ireo kaominista, sy hoe tiany hofongorina tsy ho hita any amin'ireo oniveriste ny “kolontsaina Marksisma”.
Nilaza ny sasany tamin'ireo zokiolona eny amin'ny oniversite hoe manomboka amin'ny enimbolana faharoa amin'ny 2019 dia mety ho voasakan'ireo fampihenana ireo ry zareo tsy “hanokatra ny varavarany” . Nandefa tatitra iray ho an'ny lehiben'ny fampanoavana ny Biraon'ny Fampanoavana Federaly hilazàny fa manitsakitsaka ny Lalàm-panorenan'i Brezila ireo fampihenana ireo.
MAHAFINARITRA ery ny fahitàna anao ry Rio de Janeiro! An'aliny marobe ireo mibodo ny Avenida Presidente Vargas tamin'ny firotsahan'ny alina, mba hanohitra ny fampihenana ny tetibola natao ho an'ny fampianarana sy ny siansa. #15M #TodosPelaEducação #TsunamidaEducação #NaRuaPelaEducação pic.twitter.com/8MIn91crKX
Andro maromaro taorian'ny nanambaràna ilay fampihenana tetibola, nahatsinjo fifanakalozan-dresaka manodidina ny oniversite tao amin'ny WhatsApp ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversite Federaly ao Minas Gerais (UFMG) izay mandalina momba ny vondrona WhatsApp ao Brezila. Nandrafitra fitaovana iray izy ireo mba hanarahana maso ireo vondrona WhatsApp , ary tena ampiasaina be any amin'ireo masoivoho mpanamarina vaovao ao Brezila ilay izy. Ny 8 May , ilay mpikaroka sangany, Fabrício Benevuto, nilaza tao anaty lahatsoratra iray tamin'ny Facebook hoe:
[Hita ao anaty sary] ireo hetsika/rakitsoratra/monographies esoin'ny lohateniny sy ny lohaheviny ihany. Misy ireo sarin'olona miboridana manao fety (izay tsy any anatin'ireo oniversite akory) ary ireo hetsipanoherana sy sary manadrohadro izay miteny fa 12 taona ireo mpianatra eny amin'ny oniversite vao mahazo diplaoma satria ilaozan'izy ireo mandany fotoana midoroka zavamahadomelina. Mazava ho azy fa ezaka voarindra ilay izy. Asa-nà olona matihanina. Mitovy endrika amin'ny fampielezankevitra rehefa fifidianana. Iza no mpamatsy vola an'io orinasa fanarabiana olona io?
Lazain'ny lahatsoratra iray an'ny tranonkala Ciência na Rua (“siansa eny an-dalambe” amin'ny teny Portiogey) fa ny oniversitem-panjakana no mamokatra ny 95 isanjaton'ireo mpikaroka siantifika ao Brezila. Ny fandalinana iray tamin'ny 2018 nataon'ny Clarivate Analytics avy any Etazonia dia manipika fa amin'ireo oniversite 20 goavana indrindra mpamokatra fikarohana manandanja ao Brezila, 15 no avy amin'ny tambajotra federaly.
Ny andro nisian'ilay hetsipanoherana, nampanantsoina hijoro ho vavolombelona tao amin'ny antenimieran'ny Kaongresy ny Minisitra Weintraub, momba ireo fampihenana tetibola.
“Bolsonaro fahavalon'ny Fampianarana”
“Asam-pitiavana sy Fahasahiana ny Fampianarana”
Mandritra izany, i Bolsonaro dia tany Texas, Etazonia, nhaona tamin'ilay filoha amerikàna taloha, George W. Bush. Rehefa nanontaniana momba ireo hetsipanoherana, hoy ny filoha:
Voajanahary [ny fisian'ny hetsipanoherana], amin'izao fotoana izao, mpikatroka ny ankamaroan'ny olona, saingy poakaty ny lohany. Raha anontanianao ny valiny 7 ampitomboina 8, tsy ho hain-dry zareo. Raha anontanianao izay singa mandrafira ny rano, tsy ho hainy, tsy misy zavatra hain-dry zareo. Adala ilaina sy kaondrana ry zareo, ary dia ampiasain'ny vitsy an'isa fotsiny izay mitantana maro amin'ireo oniversite federaly ao Brezila.